Xildhibaannada cusub ee federaalka oo maanta lagu wado in la fariisiyo iyo guddiga xulidda oo xaqiijiyey in uu buuxo mug sharciyeedkooda fadhi. – Radio Daljir
Xildhibaannada cusub ee federaalka oo maanta lagu wado in la fariisiyo iyo guddiga xulidda oo xaqiijiyey in uu buuxo mug sharciyeedkooda fadhi.
Agoosto 18, 2012 3:11 b 0
Muqdidisho, Aug 17 – Mudanayaasha cusub ee baarlamaanka dawladda federaalka, kana soo gudbay shuruudihii hor yaallay ee lagu hubinayey istaahilkooda xildhibaanimo ayaa maanta lagu wadaa in la kulmiyo, loona sameeyo kaararkii aqoonsiga xildhibaannimada.
Mudanayaasha la soo gudbiyey oo tiro ahaan ka badan 180 xubnood, ayaa la filayaa in ay si rasmi ah u guda-galaan qorshayaashii looga fadhiyey xildhibaannada cusub ee iskugu dhafnaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeennadiisa maadaama ay gaarsiisan yihiin tiradii loo baahnaa ee kooramka wax dooran kara sida ay noo xaqiijiyeen guddiga xuliddu.
Xildhibaannadaan ee illaa haatan la soo gudbiyo ayaa waxaa ka mid ah tiro yar oo haween ah, kuwaasi oo gaarsiisan 17 xubnood, taasoo muujinaysa in ay wax badan ka dhimman yihiin qoontadii haweenka ee ahayd 30%, lagu waday in ay si weyn ka dhax-muuqdaan tirada baarlamaan ee la soo gudbiyey xilligaan.
Faadumo Ibraahim Maalta, oo xubin ka ah guddiga u xilsaaran dib-u-eegidda mudanayaasha odayaashu soo gudbiyaan iyo in ay buuxiyeen sharuudihii looga baahnaa ayaa Radio Daljir u sheegtay dadaal dheer in ay arrintaasi u galeen guddi ahaayen, hase ahaatee ay kala durugsan yihiin sharciyadda dagsan iyo damaca aragtiyeed ee odayaasha dhaqanku.
“Issimada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho, kama dhaadhacsana qorshaha degsan ee la xiriira qoondada haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin wakiillada cusub, annaga guddi ahaanna arrinkaasi ayaa ahaa kuwii aan ku jaah-wareernay, tallaabana aan ka qaadi waynay, caqabadduna waxay ka jirtaa odayaasha wax soo gudbinaya oo xildhibaannadii ay keeneen ka dhigay rag kaliya” Faadumo Maalta.
Dhinaca kale Faadumo Maalta, waxay sheegtay in iyana gacanta lagu hayo soo gudbinta xildhibaannada dhimman, awooddana la saarayo sidii mudanayaasha la soo gudbinayo ay u noqon lahaayeen kuwa ay ka dhax-muuqdaan tiradii haween ee loo baahnaa, haddii kalase aan la aqbali doonin.
Sikastaba ha ahaatee, xildhibaannada cusub ee haatan kooramkoodu buuxsamay ayaa waxaa hor taalla hawlo wakhti kooban haysta, ayna ka mid tahay dhaarintooda xubinnimo, doorashada guddoomiyaha cusub iyo ku-xigeennadii iyo guda-galidda qaabkii doorasho ee madaxweynaha soo socda.
R/wasaare Gaas oo ka jawaabay hadalka madaxwayne Shariif ee ahaa golaha xukuumaddu inaysan go\_’aan soo saari karin